Bavulelane amacala undunankulu noNgizwe - Ilanga News
Home Izindaba Bavulelane amacala undunankulu noNgizwe
NGUMNU Ngizwe Mchunu osolwa ngokuchapha uMnu Sihle Zikalala ngenhlamba
NONHLAKANIPHO SHINGA SEBEVULELENE amacala, uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala nalowo owayengumsakazi woKhozi FM, nosezibiza ngoMengameli wama Bhinca, uMnu Ngizwe Mchunu. Lokhu kulandela isigameko okuthiwa senzeke ngoMgqibelo emcimbini obuseMoses Mabhida, obizwa ngokuthi Ingoma Kazwelonke, obekuhlangene izinkumbi zabantu abazifelayo ngomculo wesintu. UMnu Zikalala ubengomunye wezicukuthwane ebeziwuhambele lo mcimbi.
Ngokuthola kweLANGA, uMnu Mchunu obengesona isimenywa kulo mcimbi, ungene endaweni obekuhleli kuyona izicukuthwane, wagcina ebhekana ngqo noMnu Zikalala. NgoMgqibelo ebusuku kuphela umcimbi, uMnu Mchunu kuthiwa ubesefunga egomela, ethi uyovulela uMnu Zikalala icala ngoba “umshayile”. Ngokwesitatimende esikhishwe yihhovisi likaNdunankulu, kuthiwa uMnu Mchunu, ukhwele wadilika kuMnu Zikalala ngezinhlamba phambi kwabantu. Kuthiwa okucasula kakhulu uNdunankulu wukuthi uMchunu akaqali ukukhwela adilike kuyena ngenhlamba, namazwi aziswana.
“Sekunezigigaba lapho uMnu Mchunu ebevele asukeleke, achaphe undunankulu ngezinhlamba. Nasezinkundleni zokuxhumana, ngoMgqibelo usukele uMnu Zikalala ezihlalele endaweni yabakhethekile, wamchapha ngenhlamba kwaze kwangenelela abantu abebeseduze kukandunankulu,” kusho isitatimende. Lesi sitatimende sithi uMnu Zikalala njengomuntu osebenzela umphakathi nophinde abe nempilo yakhe eceleni, uzosebenzisa wonke amalungelo anawo ngokomthethosisekelo wakuleli ukuzivikela. ILANGA lishayele uMnu Mchunu, ukuziphendulela ngale mibiko, wakhwela wadilika entathelini, wathi ifonela yena ngoba vele isithengiwe ngundunankulu.
“Uma ungifonela ngokuthi undunankulu ungivulele icala, ngihlanganaphi mina pho? Kungani ungashayeli yena? Vele usufuna ukuqhuba inkohlakalo ngoba sebekukhokhele. Yingoba wena ungazi yini ngecala mina engilivule izolo, ngilivulela yena undunankulu? Uthe uma etshelwa ukuthi unikwa ithuba lokuziphendulela, bese eveza nokuthi ngelani icala alivulele undunankulu, intatheli wayishiya ikhuluma yodwa,wavala ucingo. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni, uColonel AthlendaMathe, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi amaphoyisa aseDurban Central, aphenya ngecala lokushaya elivulwe ngoMqgibelo, kwathi elokuchapha ngenhlamba ngenhloso yokudicilela phansi isithunzi lavulwa ngeSonto.
Previous articleUMNDENI UNEMIBUZO ENGAPHENDULEKI NGOKUNYAMALALA KWENDODANA
Next articleAbazali bafuna kushaywe umhlahlo esikoleni